Tag: Wasiirada | Sagal Radio Services
Akhriso: Hindise sharciyeedyada looga hadlay shirkii Golaha Wasiirada
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi aheyn oo uu shir-guddoominayey Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Xukuumada Mahdi Maxamed Guled (Khadar), iyadoo Ra’iisul Wasaaraha uu ku soo biirey shirka intii uu socday oo uu dardaaran u jeediyey Wasiirada. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa dardargeinta Hindise Sharciyeedyada muhiimka u ah howlaha Dowlada.
Golaha Wasiirada oo maanta yeelanaya kulankooda u horeeyay, labo qodob oo looga hadlayo
Sagal Radio Services • News Report • March 30, 2017
Golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda u horeeyay, kaddib markii shalay uu ansixiyay Baarlamaanka, lana dhaariyay.
Isbedel kooban oo lagu sameeyay Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya
War goor dhow naga soo gaaray Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid uu xilalka ka qaaday labo wasiir, iyadoo xilalkooda ku bedelay labo kale.
Golaha Wasiirada oo oggolaaday in la dhiso guddi ka shaqeeya isku dhafka ciidanka qaranka
Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa, waxaan shir gudoominayey ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahana Wasiirka Cadaaladda mudane Cabdullahi Axmed Jamac (Ilka jir), waxaana shirka looga hadlay Arrimaha Amniga Dalka, Isku Dhafka Ciidamada Xooga iyo Gudiga Hagida Maamulka Maaliyada,